यस्ता खाना खाने गर्नाले चश्मा कहिल्यै लगाउनु पर्दैन ! « News24 : Premium News Channel
यस्ता खाना खाने गर्नाले चश्मा कहिल्यै लगाउनु पर्दैन !
मानीसको अंगमा सबैभन्दा चांडो समस्या आउने अंग हो आँखा ।धेरै जसो मानिस आँखाका रोगी छन् भने धेरैले चस्माको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर समयमै खाने कुरामा विशेष ध्यान दिने हो भने चस्मा लगाईरहनु पर्दैन ।
एक रुसी चिकित्सकले लेखेको पुस्तक, ‘माइन्ड योर आइज’ का अनुसार खाने कुरामा ध्यान दिने हो भने आँखाका अधिकांस समस्या निको हुनसक्छन् । कम्प्युटरमा बढी काम गर्नेहरुले त झन् आँखालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सधै स्वस्थ्य राख्नको लागि भिटामिन र अरु पोषक तत्वयुक्त खाना खाने गर्नुपर्छ ।
१. हरियो सागसब्जी र फलफुल
हरियो सागपात बढी खाए आँखा तेज हुन्छ । तर कहिलेकाहीं नभई हरियो सागपात र पहेंलो फलफुलको दैनिक खानुपर्छ । यसले हाम्रो आँखालाई चाहिने पोषक तत्व प्रदान गर्दछ । हरियो तरकारी र फलफुलमा पाइने ‘केरोटीनाइड’ नामक तत्वले आँखाको भित्री भागलाई स्वास्थ्य राख्दछ ।
२. भिटामीन युक्त खानेकुराः
हुन त भिटामिन शरीरका प्राय अंगहरुलाई चाहिन्छ । तर आँखाका लागि भिटामिनयुक्त खानेकुराहरु बढी खानुपर्छ । भीटामीन ए, बी,सी र ई युक्त खानेकुरा बढि खानाले आँखामा राम्रो असर पार्छ । यस्तो खाना खानाले आँखा स्वास्थ्य त हुन्छनै, यसले आँखामा हुने मोतियाबिन्दुबाट पनि सधैका लागि मुक्त बनाईदिन्छ ।
३. नियमित भिजाएको बदाम र थोरै काजु
बदाम आँखाका लागि निकै राम्रो खानेकुरा हो । राती बदामलाई पानीमा भिजाएर, बिहान उठेर खाने गर्नाले पनि आँखालाई धेरै फाइदा हुन्छ । बदामका अलावा काजुलेपनि आँखालाई निकै फाइदा गर्छ । तर काजु एकैपटक धेरै खानु हुँदैन । थोरै तर नियमित काजु वा बदाम खानाले आँखालाई निकै राम्रो गर्छ ।
माछा आँखाको लागि अर्को उपयोगी खाने कुरा हो । माछामा ‘ओमेगा ३ फ्याटी यसिड’ नामक तत्व पाईने हुँदा यसले आँखालाई धेरै फाईदा पुर्याउँदछ । यसले आँखाको ज्योति राम्रो र ताजा बनाइराख्न अझ मद्धत गर्दछ । तर माछा खाँदा पनि ध्यान दिनुपर्छ । धेरै अगाडी मारेको माछा फर्मालिन हालेर ताजा बनाउने प्रयास गरिएको समेत पाइन्छ । त्यस्ता माछा खाँदा ध्यान दिनुपर्छ ।
५. कुखुराको अण्डा
कुखुराको अण्डामा ‘ल्यूटिन व जीजेथिन्’ नामको तत्वबाट क्यारोटिनायड्सको निर्माण हुन्छ । र यसले आँखाको कोषलाई धेरै फाईदा पुर्याउँदछ । त्यसैले दिनको एउटा अण्डा खानाले आँखा स्वास्थ रहन्छ ।
यी ५ कुराहरु नियमित वा सकेसम्म बढी खाएको खण्डमा चस्मा लगाउनुनपर्ने र लगाउनेहरुलाइ पनि आँखामा निकै राम्रो फाइदा पुग्ने हुन्छ ।